‘विर्य’ बजारमा किन्न पाइन्छ, अव पुरुषको कुनै काम छैन : सावित्रा सुवेदी [भिडियाे] – Sandes Post
‘विर्य’ बजारमा किन्न पाइन्छ, अव पुरुषको कुनै काम छैन : सावित्रा सुवेदी [भिडियाे]
April 23, 2022 2810
वि र्य वजारमा किन्न पाइन्छ,पुरुषको काम छैन” ।
अभियान्त सावित्री सुवेदीले एक युट्युव च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिंदै यस्तो विचार ब्यक्त गरेकी छिन् । जय नारीको नारा लिएर सामाजिक सन्जालमा चर्चित सुवेदीले पूर्वेली न्यूज च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यस्तो भनेकि हुन् ।
सावित्रा सुवेदीको नाम थाहा नपाउने अहिले महिला अधिकारका पक्षमा बोल्नेहरुले नसुनेको नाम पक्कै होइन । उनले गरेका कतिपय कृयाकलाप विवादित पनि बन्ने गरेका छन् । केही समय अघि उनले काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा पेटिकोट मात्र लगाएर गरेको आन्दोलन चर्चामा थियो । त्यस्तै उनले कपाल मुण्डन गरेको अभियान पनि चर्चामा रह्यो ।
जय नारीको नारा बोकेर नारीको न्यायका लागि लड्दै आएकी मानवअधिकारकर्मी सावित्री सुवेदीले आफू ३५ वर्षमा विवाह नगरी आमा बन्ने बताएकी थिईन । ब ’ला ’त्का’रविरूद्ध पेटिकोट प्रदर्शन गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेकी सुवेदीले पुरूषको शु क्रकिट भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने बताउदै आएकी हुन् ।
उनले आफु पनि एक स्वस्थ्य र पुर्ण महिला भएको बताएकी छन् ।
Prevपल शाह प्रकरणमा बाबु छोरीले सजायँ पाउने ?
Nextपल प्रकरणमा जोडिएकी जस्मिनले चालिन अर्को कदम
महल जस्तो बंगला छ, लग्जरी गाडीको लाइन, कति कमाउँछन अल्लु अर्जुन ? कति छ सम्पति ?